रविन्द्र मिश्र भन्छन्- दोस्रोको कुरै नगर्नोस्, म पहिलो भैसकें ! - २८ कार्तिक २०७४, NepalTimes
रविन्द्र मिश्र भन्छन्- दोस्रोको कुरै नगर्नोस्, म पहिलो भैसकें !
२८ कार्तिक २०७४
२८ कात्तिक, काठमाडौं । राजधानीको थापागाउँमा साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक एवं काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रको सम्पर्क कार्यालय छ । कार्यालयमा बिहानैदेखि कार्यकर्ता र समर्थकहरुको भीडभाड देखिन्छ । आइटीमा दख्खल राख्ने केही युवाहरु कम्प्युटमा व्यस्त देखिन्छन् । पर्चा पम्प्लेट छरपस्ट देखिन्छ ।
मिश्रले आफूलाई काठमाडौं १ का उम्मेदवार हरिबोल भट्टराईले पनि समर्थन जनाउने र अन्तिम घडीमा आएर वाम गठबन्धनका उम्मेदवार अनिल शर्माले पनि सहयोग गर्ने अपेक्षासमेत व्यक्त गरे । यद्यपि उनीहरुको समर्थन विनै एक्लै पनि जित पक्का भइसकेको उनले दाबी गरे । (onlinekhabar)